Rudzi: Home Appliances
Chii chinonzi TV LCD "Lentel" ???? Ndakamira kwemaminetsi makumi mana nemashanu, ndichienzaniswa nemhando dzakasimudzirwa, asi zvinoratidza zvakanaka ...
Chii chinonzi TV LCD "Lentel" ???? Ndakamira kwemaminetsi makumi mana nemashanu, ndichiienzanisa nemhando dzakasimudzirwa, asi zvinoratidza zvikuru ... ndanga ndichiita izvi kwenguva yakareba uye handisati ndaona iro brand. Ndinokuvimbisa ...
Ini ndinogonesa sei dhiramu yekuchenesa basa mune yangu LG yekuwachisa muchina? Uye hapana kana chinhu pamusoro peizvi mumirairo? Kana muchina usina basa iri, saka usachinja neimwe nzira ... "Iyo Drum Yakachena modhi inoitirwa ...
Kuvhara TV kunogoneka kudzivirirwa kubva kuvana senge pane masitofu emasemichemical, asi pane basa rakadaro mu data sheet # 10064; Set. # 10064; SMART password # 10064; # 10064; # 10174; # 10064; Zvirongwa # 10064; # 10137; # 10064; LOCK # 10064; # 10137; # 10064; # 10064; password Inoisa kana kushandura password yeTV # 9998; Standard password # 12300; 0000 # 12301;.
zvinorevei kana vachitaura nezve mhepo inodzora mapfumbamwe, manomwe Iwo ese maair conditioner emhando dzakakurumbira anonamatira kune chiyero chisingataurike chemazana akaenzana esimba. Mazhinji mamodheru ezvekupatsanurwa masisitimu ane indekisi yemagetsi muzita risingaenderane nemakirowatts, ...
Ndiani ane zanussi gasi mvura hita saye, ndezvipi zvimwe zvaunokurudzira? Zvese zvakatengwa makore matatu apfuura hazvichatengeswa. saka vagadziri vari pamberi pe "ongororo" dzedu, saka, tora maitiro kubva ...
Unoda Smart TV here? Ndiani ane Smart TV? Iyo diki set-yepamusoro bhokisi "media player" yakakosha madhora makumi matatu inokutendera iwe kushongedzera zvachose chero TV neese mashandiro eSmart TV uye nezvimwe zvakawanda. Gore…
Unganzwisisa sei ??? Mashini ekuwachisa matema? Dzinosiyana sei nezvakajairwa ??? Pamwe mweya-bubble rakaputika))))))))) Muchina wekuwacha wekambani DEU wakashanda zvakatendeka kweanopfuura makore gumi neshanu! Zvinotora nguva yakawanda kugeza ...
TV LG p42la662v ndeipi stereo vaviri iri nani kune 3D? Mubvunzo: Ndeipi vhidhiyo ye3D yakakodzera LG TV ine passive 3D? Mhinduro: Unofanirwa kusarudza stereopairs1 nechisarudzo chisina kukwira kupfuura 1920 × 1080. ...
Kukurumidza mahedhifoni ane yakanaka bass Audio-Technica ATH-CK303M nzeve dzakanaka Tarisa kune "vstutkom" ini ndine vrayles bluetooth mahedhifoni ipapo. 2.1 yakatora. Ini handina kukwanisa kuwana zvakachipa uye mabass ipapo, zvinotyisa. Kuseri…
Ndiri kuda kutenga mwenje weLEM, machira emumba mangu ese akagadzirirwa 60 W mubvunzo urimukati Kazhinji, kana uchitsiva mwenje we incandescent neLED, simba remwenje reLED rakawedzerwa ne6. Zvisinei, pane ...
kupi kwaunotora mabrashi eSAYI mahara Unogona kugadzira mabrashi eSAY iwe pachako. Iwo mabhusiro ekutanga ari mufaira uko iyo SAI pachayo iri (iyo nzvimbo-iyo-iyo-iyo-SAIEasy Paint Chishandiswa SAIelemap iri nhema). Kune boka re .BMP mafaera. 1.…
Ndeupi brand yeTV yaunofanira kutenga? Philips haina basa chinhu chikuru ndechekuti chiratidzo cheTV chine mhando yepamusoro, semuenzaniso, pikicha yeTV yedigital yakanaka, kusiyana neiyo analog TV chiratidzo, ini ndine 3 ...
Chii chinonzi difavtomat ye? Iyi ipfupi redunhu breaker uye RCD mune imwe kesi - Izvo zvinodikanwa kuitira chengetedzo izere yemutsetse pakurwisa kuwandisa uye kushamiswa kwemagetsi. Difavtomat izita rakapfupikiswa ...
aluminium kana cast cast iron cookware inokodzera induction hob? Mukutaura, chero castware yesimbi yekubikira yakanaka kune induction cookers, asi isu tinokurudzira kutenga inotengeswa kunze simbi cookware, ine inotapira uye nezvimwe ...
Ndeipi chainsaw iri nani pane Husqvarna kana Kudzikama? Kwandiri, Husqvarna ari nani, asi gadzirira kutenga zvigadzirwa zvemhando (mafuta). Kudzikama zvakare kwakanaka, asi Husqvarna yakagadzirirwa huwandu hukuru hwehuni. Mubvunzo wakadai kwandiri ...
zvinorehwa nemavara CL pakuratidzwa kweMuchina wekuwachisa LG. Haisi kukanganisa. CL - vana vanokiya (kukiya kubva kuvana) Pakupedzisira tora rairo irimo muruoko uverenge. Muchina wekuwacha malfunctions ...
Ndiudze ndekupi kwekutenga mbiya yePanasonic multicooker SR-TMH18, Mhoro, wakakwanisa here kuwana mbiya kumwe kunhu? Ndiri kutarisawo, handiwani kwese ((Dambudziko rakafanana: chidimbu mundiro chakabvarurwa ...
Sei vachiti HERZ paTV iri kubiridzira nekushambadzira ??? Iko hakuna kupokana mune zvirevo zvehunyanzvi - zvirokwazvo, pane musiyano unooneka zvakajeka mumufananidzo pakati peTV ine rutsigiro rwe100 hertz uye ...
Ndeupi musiyano uripo pakati Yakadzika chando, hapana fost uye iyo yekudonha kutonhora sisitimu yefiriji? Ndinogona kushandisa mutauro unowanikwa? Kwete Frost tekinoroji yazvino, iyo michina inosimbisa iyo firiji isina-kutonhora madziro, otomatiki defrosting uye yepamusoro-mhando kutonhora ...
Mafiriji LG. Kududzira tsamba. REFRIGERATORS LG Nhasi, imwe yemafriji anozivikanwa ndeye 399 akateedzana. Mafiriji eiyi nhevedzano, sezvinhu zvese zviri mumutsara, haadi kubviswa. Ngationgororei kumaka ...
Mibvunzo ye92 mu database yakagadzirwa mu 0,540 masekondi.